Xayawaanku waxaa lagu quudiyaa cunto, cuntada waxaa soo saara roob, roobabku wuxuu ka yimaadaa allabaryo, iyo ficil waa la fuliyaa tallaabo. Ogow in ficilka uu ka yimid Ruuxa Sare oo ka mid ah; Sidaas daraaddeed dhammaantiis waa wada quduusan yihiin oo allabari u bixiya.
CUNTADA waa inaysan noqon mid aad u caan ah si ay u noqoto mawduuca falsafadda. Qaar waxay ku qaataan qaybta ugu weyn ee afar iyo labaatanka saacadood ee foosha, taas oo ay ku kasban karaan lacag ku filan si ay u iibsadaan cuntada lagama maarmaanka u ah inay jirka iyo nafta wada joogaan. Kuwo kale oo aad u fiican oo si joogta ah u shaqeeya waxay ku qaataan wakhti badan inta ay qorsheynayaan waxa ay cuni doonaan, sida loo diyaarin doono, iyo sida ay u farxi doonto iyaga iyo saxarada saaxiibadood. Kadib nolol maalmeed oo ay ku quudiyaan jirkooda, dhammaantood waxay la kulmaan qandaraas la mid ah, way dhintaan, waa la dhigay. Shaqaalaha korrinka iyo ninkii dhaqanka, shaqaale dharka dharka iyo dumarka moodada, tuugada iyo askariga, addoonta iyo sayidkiisa, wadaadada iyo cagaha, dhammaantood waa in ay dhintaan. Ka dib markii ay jidhkooda ku quudiyaan geedo yaryar iyo xididada, cuntooyinka nafaqada leh iyo kuwa hodanka leh, jidhkooda iyaguna waxay u adeegaan sidii cunto iyo xayawaanka dhulka, kalluunka badda, shimbiraha hawada, dabka dabka.
Dabeecaddu waa miyir-beelka boqortooyadeeda oo dhan. Waxay ku sii socotaa qaabab iyo meydad. Boqortooyad kasta waxay kor u qaadaysaa miisaan si loo soo koobo koritaanka hoose, si ay u muujiso boqortooyada kor ku xusan, iyo in ay miyir beeliso. Dunida oo dhan waxay ka kooban tahay qaybo iskudhaf ah. Qeyb kastana waxay leedahay laba hawlood, si ay u noqoto mabda'a wargalinta ah ee hoos ku xusan, iyo inay noqoto cunto ku jirta jirka kor ku xusan.
Cuntadu waa nafaqo ama qalab lagama maarmaan u ah dhismaha, shaqada, iyo joogtaynta, nooc kasta oo jirka ah, laga bilaabo macdanta ugu hooseeysa ilaa sirdoonka ugu sarreeya. Qalabkan ama maaddadani waxay waligeed ku wareegayaan ciidammada asaasiga ah ee qaababka la taaban karo, marka laga reebo qaab dhismeedka iyo jidh-dooyinka jirka, illaa tan lagu xalliyo miisaannada iyo awoodda. Sidaa daraadeed, caalamku dhammaantiis wuxuu si joogta ah u quudiyaa.
Iyada oo loo marayo cunnooyinka cuntada waxay helayaan jidheed waxayna galaan adduunka. Cunto waxay ku nool yihiin adduunka. Cuntada oo dhan waxay ka tagtaa adduunka. Qofna ma baxsan karo sharciga dib u soo celinta iyo magdhawga taas oo dabiiciga ah uu sii socdo wareegyo joogto ah iyada oo loo marayo boqortooyooyinkeeda, isaga oo dib ugu soo laabanaya wixii wixii laga soo qaaday oo la isku halleynayo.
Iyada oo si haboon loo isticmaalo waaxda cuntada ayaa la sameeyaa waxayna sii wadaan horumarintooda baaxadda leh ee koritaanka. Iyada oo isticmaalka aan habooneyn ee cuntada jirka jirku caafimaadkiisu wuxuu noqonayaa mid jiran wuxuuna ku dhamaan doonaa wareegga dareenka dhimashada.
Dabka, hawada, biyaha, iyo dhulka, waa walxaha, walxaha fiiqan, kuwaas oo isku daraya oo ku milmi kara dhagaxa adag iyo macdanta dhulka. Dhulka waa cuntada khudradda. Geedku wuxuu xididdadiisa ku dhuftey dhagax weyn, iyadoo mabda'a noloshu ka dillaacdo, waxay furan tahay oo ka doorbidi doontaa cuntada ay u baahan tahay si loo dhiso qaab dhismeed cusub. Noloshu waxay keenaysaa dhirta si ay u balaariso, ufurto, una koraan qaabka ugu caansan ee laftiisa. Fulinta dareenka iyo rabitaanka xayawaanka waxay u qaadataa sida cuntada, dhulka, khudradda, iyo xayawaanka kale. Laga soo bilaabo dhulka iyo qaab dhismeedka fudud ee geedka, xayawaanku wuxuu dhistaa jirkooda adag ee jirka. Xayawaanka, dhirta, dhulka iyo waxyaallaha, dhammaantood waxay u adeegaan sida cuntada loogu talagalay dadka, maskaxda.
Cuntadu waa laba nooc. Cuntada jidhku waa dhulka, dhirta, iyo xayawaanka. Cuntada nafsiga ahi waxay ka timaadaa caqliga guud ee caalamiga ah kaas oo jidhku ku xidhan yahay jiritaanka.
Man waa diiradda, dhexdhexaadiye, udhexeeya ruuxa iyo jidhka. Iyadoo loo marayo wareegga joogtada ah ee u dhaxeeya ruuxa iyo jidhka ayaa la hayaa. Qaybaha, dhagxaanta, dhirta, dhoobada, kalluunka, shimbiraha, xayawaanka, ragga, awoodaha, iyo ilaahyada, dhammaantood waxay gacan ka geystaan ​​taageerada midba midka kale.
Ka dib markii habka qofka dilaaga ah uu ku socdo wareegga cuntada iyo jidhka ruuxiga ah. Iyada oo fikradiisa uu ruuxu helo cunto nafeed iyo wuxuu u gudbiyaa adduunka jir ahaaneed. Ninka jidhkiisa hela wuxuu helaa cunto jireed, wuxuu ka kooban yahay nuxurkiisa, iyo fikirkiisa wuxuu u beddeli karaa wuxuuna kor u qaadi doonaa adduunka ruuxiga ah.
Cuntada waa mid ka mid ah macallimiinta ugu fiican. Doonista cuntada waxay bareysaa jaahilnimada iyo caajisnimada koowaad ee shaqada. Cuntada ayaa muujinaysa qulqulka iyo cufaanka in ka badan quudinta waxay keeni doontaa xanuun iyo jirro jirka; oo sidaas ayuu u bartaa is-xakamaynta. Cunnadu waa asal khafiif ah. Waxa laga yaabaa inaanay u muuqan ragga runtaa, laakiin nin mustaqbalka ah ayaa arki doona kana mahadcelin doona xaqiiqdaas wuxuuna ogaanayaa cuntada oo beddeli doonta jirkiisa mid ka mid ah amar sare. Sababta uu ku fashilmay inuu hadda sameeyo waa sababtoo ah isagu ma xakamaynayo rabitaankiisa, ma u adeego asxaabtiisa, iyo ma arko ilaahnimadu naftiisa ka muuqato.
Cuntadu waxay baraysaa ninkii miyir-qabka ah casharka wareegyada iyo caddaaladda. Waxa uu arkaa inuu ka qaadan karo dabeecadda qaar ka mid ah alaabteeda, laakiin waxay rabtaa oo ku khasabtaa isbeddelka isbeddelka iyaga oo u dhigma. Marka sharciga caddaaladda la raaco uu noqdo nin caqli leh, korna u qaadaya sarreyaal sare, wuxuu ku soo galaa adduunka ruuxi ah oo uu ka helayo waxyigiisa.
Cunnadu waa cunto. Dunida oo dhan nafteeda ayaa nafteeda u bixisa. Ninka wuxuu jidhkiisa ka dhigaa cunnooyinka boqortooyooyinka hoos ku xusan, wuxuuna ka sarreeyaa cuntadiisa ruuxiisa inta lagu jiro fekerka. Haddii amarka horumarintu sii socdo, waa in uu noqdaa mid jidheed u sameeya hay'ad ka badan kan naftiisa. Halkaan wuxuu leeyahay xididada jirkiisa xayawaanka ah wuxuuna yahay qayb ka mid ah maskaxda ruuxiga ah ee maskaxda. Waa Ilaahiisa. Cuntada uu qofku u adeegsan karo ilaahiisa waxa uu ka kooban yahay fekerka sharafta iyo camalka, rabitaanka, iyo fekerka noloshiisa. Kanu waa cuntada oo ah jidhka caynkaa oo kale ah ee nafta la sameeyay. Naftu waxay ku jirtaa awoodda ama jidhka ruuxiga ah kaas oo ah mabda'a iyo mabda'a caqli ahaaneed.